Taageeraha quraaradda, maxaa loogu talagalay oo kuwee ugu wanaagsan? | Ee kalluunka
Waxaan hore u sheegnay dhowr jeer in kan ugu adag, iyo sidoo kale kan ugu muhiimsan, marka haysashada quraaradda ilaali dhexdhexaad deggan. Taas micnaheedu waa in lagu keydiyaa meel heerkulka dhexdiisa ah, iyadoo la kaashanayo marawaxad -biyoodka, iyo biyo nadiif ah, si uu kalluunku u noolaado.
Maanta waxaan diiradda saari doonnaa kan ugu horreeya, sida loo ilaaliyo heerkulka deggan ee quraaradda, wax si gaar ah ugu adag bilaha kulul sida kuwan. Sidaa darteed, waxaan arki doonnaa noocyo kala duwan oo ah marawaxadaha aquarium -ka oo noo oggolaan doona inaan ku hayno heerkulka quraaradda mid deggan, iyo sidoo kale talooyin ku aaddan doorashada iyo noocyada ugu wanaagsan, iyo kuwo kale. By habka, si loo hubiyo heerkulka si kalsooni leh, waxaan kugula talineynaa maqaalkan kale ee ku saabsan kan ugu fiican heerkulbeegga quraaradda.
1 Taageerayaasha Aquarium -ka ugu Fiican
2 Noocyada taageerayaasha quraaradda
2.1 Iyadoo heerkulbeeg
2.4 Taageere Nano
3 Noocyada ugu wanaagsan ee taageerayaasha quraaradda
4 Muxuu u yahay taageere quraaradda?
5 Sida loo doorto taageere quraaradda
5.1 Cabbirka aquarium-ka
5.2 Nidaamka Hagaajinta
6 Sida loo isticmaalo marawaxadda quraaradda si sax ah
7 Taageeraha quraaradda ama qaboojiyaha? Waa maxay faa'iidooyinka iyo kala duwanaanshaha mid kasta?
8 Xagee laga iibsadaa taageerayaasha quraaradda jaban
Taageerayaasha Aquarium -ka ugu Fiican
Qaboojiyaha JBL PROTEMP x300...
Ventilator naftiisa ...
Qaboojiyaha Hawada AOSEE ...
Easycargo 2 Xidhmada 40 mm ...
Taageeraha qaboojinta MOVKZACV
Noocyada taageerayaasha quraaradda
Qiyaas ahaan, dhammaan taageerayaasha sidaas oo kale ayay sameeyaan, laakiin sida had iyo jeer waxaa jira badeecooyin badan oo wax ka beddeli kara oo gebi ahaanba la qabsan kara adiga iyo kalluunkaaga ama, naxdinta, noqda qashin aan wax yar noo tarayn. Taasi waa sababta aan u diyaarinnay noocyada ugu badan ee taageerayaasha quraaradda si ay kaaga caawiyaan inaad hesho aaladda ugu fiican.
Shaki la'aan mid ka mid ah kuwa ugu waxtarka badan, haddii uusan ahayn kan ugu faa'iidada badan, gaar ahaan haddii aad tahay qof aan cillad lahayn ama haddii aad arrinta ku cusub tahay. Taageerayaasha Thermostat waxay leeyihiin shaqo otomaatig ah oo si otomaatig ah u xirta marka quraaradu gaarto heerkulka la rabo, waana la hawlgeliyaa haddii heerkulkani dhaafo.
Heerkulbeegyada qaarkood waa aalad ay tahay inaad iibsato marka lagu daro marawaxadda. Waxaa loogu talagalay inay ku xirmaan tan, oo ay yeeshaan dareere heerkulka oo gala biyaha si, dabcan, loo cabbiro heerkulka uu yahay. Noocyada ugu waaweyn ee aaladaha loogu talagalay aquariums -ka, sida JBL, waxay kugula talinayaan inaad u isticmaasho heerkulbeeggaaga kaliya taageerayaasha astaantooda si aad uga fogaato is -waafajinta suurtagalka ah ee aaladda, korantada ...
Taageere aamusan Waa lama huraan haddii aad haysato quraaradda u dhow (tusaale ahaan, xafiiska) oo aadan rabin inaad ku waasho buuq. Mararka qaarkood way adag tahay in la helo, ama si toos ah uma fuliyaan wixii ay ballanqaadeen, marka xaaladahaas waxaa aad loogu talinayaa in la fiiriyo fikradaha sheyga internetka.
Ikhtiyaar kale, oo xoogaa ka aamusan taageerayaasha, waa qaboojiyeyaasha biyaha. (oo aan gadaal ka hadli doonno), oo isku si u dhaqma, laakiin leh buuq yar.
Qalabka neefsashada oo leh baaritaan waa lama huraan haddii uu yahay moodel leh heerkulbeeg, mar haddii, haddii kale, sidee kale ayaa aaladdu u soconaysaa? Caadi ahaan baaristu waa fiilo ku xiran aaladda, iyada oo aaladda baarta lafteeda dhammaadkeeda, taas oo ay tahay inaad ku quusto biyaha si aad u ogaato heerkulka.
taageere la qaadi karo...
Kuwa aan rabin taageere weyn oo fool xun waxaa jira kuwo yaryar, badanaaba leh naqshado aad u qurux badan oo is haysta, kuwaas oo mas'uul ka ah dib -u -cusboonaysiinta biyaha ku jira quraaraddaada. Haa runtii, kaliya ku shaqee biyo -biyoodka ilaa xad go'an (ku calaamadee faahfaahinta tusaalaha), maadaama ay yaryihiin, waxyar bay ka yaryihiin.
Noocyada ugu wanaagsan ee taageerayaasha quraaradda
hay saddex magac oo waaweyn oo ku takhasusay alaabta quraaradda iyo, si gaar ah, taageerayaasha iyo nidaamyada qaboojinta.
Qaboojiyaha Sobotoo ...
Boyu waa shirkad laga aasaasay Guangdong (Shiinaha) oo leh in ka badan labaatan sano oo waayo -aragnimo ah naqshadaynta alaabada quraaradda. Dhab ahaan, Waxay leeyihiin nooc kasta oo badeecooyin ah, laga soo bilaabo taageerayaasha ilaa kuwa sameeya ruxruxa, iyo dabcan meelo badan oo biyo -biyoodyo kala duwan ah, oo leh gabal yar oo alaab guri ah iyo wax walba si ay uga dhigaan kuwo bilicsanaan badan.
Calaamadan Barcelonan ma bixinayso wax ka yar ama ka yar tan iyo 1996 samaynta aquariums -ka iyo alaabada loogu talagalay in lagu hagaajiyo nolosha kalluunkayaga oo ay heli karaan taageerayaasha. Ku saabsan taageerayaasha, ku soo bandhig mid ka mid ah siyaabaha ugu jaban si aad ugu cusboonaysiiso quraaraddaada suuqa, iyo sidoo kale kululeeyayaasha, haddii ay dhacdo inaad u baahato saameyn liddi ku ah.
Shaki kuma jiro shirkadda ugu sharafta badan iyo sumadda alaabada quraaradda leh taariikhda ugu dheer, tan iyo aasaaskeeduna wuxuu ku soo beegmay lixdameeyadii Jarmalka. Maxaa ka sii badan, waxay leeyihiin habab badan oo qaboojin oo la heli karo, oo kaliya maahan quraaradaha yar yar, laakiin waxay bixiyaan xalal xitaa biyo -biyoodka ilaa 200 litir.
Muxuu u yahay taageere quraaradda?
Kulaylku waa mid ka mid ah cadawga ugu xun ee kalluunkeenna, ma aha oo kaliya sababtoo ah way adag tahay in la qaado, laakiin sidoo kale sababtoo ah, kuleylka, waxaa ku yaraanaya oksijiinta biyaha. Kor, kalluunka habka dib u dhaca ayaa dhacda, maadaama kulaylku dhaqaajinayo oo sababa in dheef -shiid kiimikaadkoodu u baahdo oksijiin badan si uu u noolaado. Taas macnaheedu waa haddii biyuhu aad u kululaadaan, way ku adkaan doontaa kalluunka inuu neefsado. Taasi waa sababta joogteynta heerkulka quraaradda ay aad muhiim u tahay, iyo sababta aan ugu baahan nahay heerkulbeeg iyo nidaam hawo oo mas'uul ka ah ilaalinta biyaha heerkulka saxda ah.
Sida loo doorto taageere quraaradda
Sidaan horay u aragnay, waxaa jira dhowr nooc oo taageerayaal ah oo la heli karoWaxay ku xirnaan doontaa baahidayada iyo doorbididda inaan mid ama mid kale dooranno. Taasi waa sababta aan ugu diyaarinay liiskan waxyaabaha ugu badan ee la tixgeliyo marka la dooranayo taageere ku habboon quraaradda:
Marka hore, Waxa ugu muhiimsan ee aan eegi doonno waa baaxadda quraaradda. Sida iska cad, aquariums -yada waaweyn waxay u baahan doonaan taageerayaal badan, ama awood badan, si ay awood ugu yeeshaan inay biyaha ku hayaan heerkulka saxda ah. Markaad u tageyso inaad iibsato marawaxadda, fiiri tilmaamaha, inta badan taageerayaashu waxay tilmaamayaan inta litir ee ay awood u leeyihiin inay qaboojiyaan.
Nidaamka hagaajinta waa oo si dhow ugu xidhan sida ay u fududahay in fanku isu ururiyo oo kala furfuro. Badankoodu waxay leeyihiin nidaam goos goos ah oo ku dheggan dusha sare ee quraaradda si ay kor uga qaboojiyaan, mid ka mid ah kuwa ugu dhaqsaha badan uguna habboon ee kor loogu qaadi karo oo looga saari lahaa marawaxadda oo loo kaydin lahaa marka aynaan u baahnayn, maaddaama ay u badan tahay, iyadoo ku xiran hadba meesha aan noolaanno, in aan isticmaalno kaliya bilaha ugu kulul sannadka.
Sidii aan hore u sheegnay, buuqa marawaxadu waa wax lagu xisaabtamo haddii aad quraaradda ku haysato xafiis ama qolka cuntada oo aadan rabin inaad waasho. Inkastoo moodooyinka ugu fudud badiyaa ma aha kuwo aad u degganWaa ikhtiyaar aad u xiiso badan oo aad ku hubin karto tilmaamaha alaabta. Xaaladdan oo kale, waxaa sidoo kale aad loogu talinayaa in la arko waxa adeegsadayaashu u maleeyaan badeecadda, xitaa raadinta fiidiyowga YouTube -ka si loo arko sida ay u dhawaaqeyso.
Ugu dambeyntii, xawaaraha fanku wuxuu la xiriiraa awoodda. Mararka qaarkood, si kastaba ha ahaatee, way ka kharash badan tahay in lagu iibsado saddex taageere mid ka badan hal aad u awood badan, maadaama ay tani si siman u qaboojin doonto biyaha, taas oo si gaar ah muhiim ugu ah aquariums-yada waaweyn.
Sida loo isticmaalo marawaxadda quraaradda si sax ah
Marka lagu daro taageere quraaradda, waxaa jira arrimo kale oo caawiya in heerkulka biyuhu sax yahay. Si taas loo gaaro, raac talooyinka soo socda:
Ka ilaali quraaradda biyaha ilaha kulaylka tooska ah ama iftiinka qorraxda (Tusaale ahaan, haddii uu daaqad ku dhow yahay, xidh daahyada). Haddii aad awooddo, qolka quraaradda ku hay sida ugu macquulsan.
Daboolka fur dusha sare si aad biyaha u cusbooneysiiso. Haddii loo baahdo, hoos u dhig heerka biyaha dhowr inji si uusan kalluunkaagu u boodin.
Demi nalalka quraaradda, ama ugu yaraan yaree saacadaha ay ku jiraan, si loo yareeyo ilaha kulaylka.
Ku rakib taageere adoo raacaya tilmaamaha alaabta. Waxaa ugu wanaagsan in la meeleeyo si ay ugu daboosho biyaha intii suurtogal ah xagga sare. Meelaha biyo -biyoodyada waaweyn, waxaa laga yaabaa inaad u baahato xirmo leh dhowr taageere si ay biyuhu u siman yihiin.
Ugu dambeyntii, wuxuu hubiyaa heerkulbeegga dhowr jeer maalintii si uu u arko in heerkulku sax yahay. Haddii aysan ahayn, iska ilaali inaad qaboojiso biyaha adiga oo ku daraya baraf baraf ah ama isbeddelka degdegga ah ee heerkulka ayaa culays ku keeni kara kalluunkaaga.
Taageeraha quraaradda ama qaboojiyaha? Waa maxay faa'iidooyinka iyo kala duwanaanshaha mid kasta?
Inkasta oo hadafkaagu isku mid yahay, taageere iyo qaboojiye ma aha qalab isku mid ah. Midda hore waa mid aad u fudud, maadaama ay si fudud uga kooban tahay taageere ama dhowr oo qaboojiya biyaha xagga sare ka yimaada, kuwaas oo moodooyinkooda ka sii adag ay weheliyaan heerkulbeeg si otomaatig ah u damiya ama bakhtiiya marka ay ogaadaan in biyuhu aysan ku jirin heerkul sax ah.
Bedelkii, qaboojiyaha waa aalad aad u adag oo aad uga awood badan. Kaliya maahan inay ku hayn karto quraaraddaada heerkul ku habboon, waxay kaloo ku hayn kartaa kuleylka ka imanaya aaladaha kale ee lagu rakibay quraaradda. Qaboojiyayaashu waa iibsi wanaagsan oo loogu talagalay aquariums -ka aadka u waaweyn ama aadka u jilicsan, haa, aad bay uga qaalisan yihiin taageere.
Xagee laga iibsadaa taageerayaasha quraaradda jaban
Ma badna meelaha aad ka heli karto taageerayaasha quraaraddaRuntu waxay tahay, maadaama ay yihiin aalad aad u gaar ah oo caadiyan loo isticmaalo dhowr bilood oo sanadka ah. A) Haa:
En Amazon Waa meesha aad ka heli doonto taageerayaasha kala duwan ee ugu sarreeya, inkasta oo mararka qaarkood tayadooda ay ka tagto wax la rabo. Sidaa darteed, gaar ahaan kiiskan, waxaan kugula talineynaa inaad si taxaddar leh u fiiriso fikradaha isticmaaleyaasha kale, kuwaas oo awoodi doona inay ku siiyaan tilmaamo haddii alaabtu adiga waxtar kuu leedahay iyo in kale.
Dhinaca kale, gudaha dukaamada xayawaanka Takhasus leh, sida Kiwoko ama Trendenimal, waxaad sidoo kale heli doontaa moodooyin aad u yar oo la heli karo. Sidoo kale, waxa wanaagsan ee ku saabsan bakhaarradan ayaa ah inaad qof ahaan aadi karto oo aad indhahaaga ku arki karto badeecadda, oo xitaa weydii qof dukaanka ku jira haddii aad su'aalo qabto.
Taageeraha quraaradda ayaa badbaadin kara nolosha kalluunkaaga bilaha ugu kulul sannadka, oo leh waxa aan shaki ku jirin qalab aad u faa'iido badan. Noo sheeg, sidee buu kalluunkaagu ula qabsadaa kulaylka? Ma leedahay taageere si gaar ah adiga kuugu shaqeeya? Ma rabtaa inaad la wadaagto taladaada iyo shakigaaga inta kale?
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Gargaarka » Taageeraha quraaradda